Reheniyaam - Wikipedia
Reheniyaam (ingiriis: Rhenium) astaanta (Re) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay todobaatan-iyo-shan (75). Curiyaha Reheniyaam waa bir ka tirsan Transitional Metalska guruubka 7aad ee Diwaanka Curiye, taas oo miisaanka atomkeedu yahay 186.207.
Curiyaha Reheniyaam waa bir aad u culus, midabka naxaasta oo cad, kuna jirta khaanada sadexaad ee guruubka 7aad ee diwaanka curiyahaha iyo biraha guruubka d-block.
Curiyaha Reheniyaam aad ayuu ugu yaryahay oogada dhulka taas oo lagu sheego in 1 ka mid ah milyan (1/1,000,000) sameeyska dhulka. Sidoo kale, curiyahan Reheniyaam midka sadexaad ee ugu sareeya barta heerkulka dhalaalinta iyo kan ugu sareeya barta kululeynta dhamaan curiyayaasha oo dhan.
Curiyaha Reheniyaam waxaa la helay sanadkii 1925 ayadoo loogu magac daray webiga Rhino ee qaarada Yurub.
Marka Reheniyaamta lagu daro curiyeha Nikel si loo sameeyo jaandi 6% Reheniyaam ah, waxaa laga sameeyaa mashiinka diyaaradaha dheereeya. Sidoo kale, Reheniyaamtu waxay ka mid tahay macdanta ugu qaalisan dunida, taas oo hal Kiilogaraam lagu iibiyo US$4,575.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Reheniyaam&oldid=219215"
Last edited on 11 Oktoobar 2021, at 22:19
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Oktoobar 2021, marka ee eheed 22:19.